Virus အကိုက်ခံရပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးနေသော Data များ | ZAW HLAING HTUN Computer Technology Sharing
Virus အကိုက်ခံရပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးနေသော Data များ
Posted by zawhlainghtun on September 24, 2012
မိမိဖတ်ရှုနေသော Net Guide Journal မှ အသုံးဝင်မယ့် နည်းပညာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ကို ရွေးချယ်တင်ပြလိုက်ပါသည်
ကွန်ပျူတာတွေမှာ ဗိုင်းရပ် အကိုက်ခံရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ Data ပျောက်ကွယ် နေတာ မျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထည့်ထားတဲ့ DATA တွေ မတွေ့ရတော့တဲ့အခါ စိတ်ညစ်ပြီး Viurs ကင်းသွားအောင် ဆိုပြီး format ပြုလုပ်ဖို့တော့ မစဉ်းစားလိုက်ပါနဲ့ အမှန်တကယ်တမ်းက Virus တွေဟာ များသောအားဖြင့် DATA တွေကို Hidden File အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ မိမိ DATA တွေအစား အမည်တူ Virus တွေကိုတည် ဆောက်လိုက်ကြပါတယ်။ အသုံးပြုသူက မသိလို့ သွားပြီး ဖွင့်မိတဲ့အခါမှာတော့ User ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ Virus တွေကို Run ခွင့် ပြုလိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အခြေအနေတော်တော် ဆိုးသွားပါပြီ။ Window ရဲ့ .exe တွေကိုလိုက်ပြီး ပူးနေရင်တော့ ပြသနာက စပါပြီ။ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတွေ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အမှားလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
Virus ကို Run ပြုလုပ်မိသွားမှ သတိထားမိပြီး ငါ့ကွန်ပျူတာတော့ Virus ကိုက်ပါပြီဆိုပြီး Antivirus တွေထပ်တင် Update တွေလုပ် ပြီးတော့ Full Scan နဲ့ စစ်ချလိုက်ပါရော။ အဲဒီအခါမှာ Virus တွေပါ ဝင်ရောနေတဲ့ Window ရဲ့ System file တွေ exe တွေ အားလုံးကို Antivirus က Virus အဖြစ်နဲ့မြင်ပြီး Virus ပေါင်း ထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ချီ ကိုက်နေသလိုမျိုး ပြတတ်ပါတယ်။
Full Scan စစ်လို့မပြီးခင်မှာပဲ Window ဟာ Restart ဖြစ်ပြီး ပြန်မတက်လာနိုင်တဲ့ ဘဝမျိုးကို ခဏခဏ ရောက်ကျရပါတယ်။ Recycler, Copy Shortcut လို Virus မျိုးတွေဟာ DATA တွေကို Hidden File, Folder အဖြစ် ပြောင်းလည်းပစ်ကြပါတယ်။ Hidden ဖြစ်နေတဲ့ သာမာန် File, Folder တွေကို ဖော်ရတာ မခက်ပေမယ့် Virus ကိုက်လို့ ပြန်ဖော်ရတဲ့အခါမှာတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ မရရှိပဲ အခက်တွေ့ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Hidden တွေကို ပြန်ဖော်တဲ့ နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။
၁။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Tools ထဲက Folder options ကိုဝင်လိုက်ပါ(shortcut နဲ့ သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Alt+T– Alt+o)။
၂။ Folder options Box ကျလာ ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲကမှ View ထဲက Show hidden files, folders, and drives ကိုရွေးပြီးတော့ အမှန်ခြစ်နှစ်ခု ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ။ အမှန်ခြစ်ဖြုတ်တုန်းမှာ Yes or No မေးရင် Yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အခုဆိုရင် Hidden ဖြစ်နေတဲ့ဖိုင်တွေ ပြန်ပေါ်လာပါပြီ။ ကျနော်တို့ Hidden Files ကို ပြန်ဖော်ဖို့က နည်းလမ်းသုံးသွယ်ရှိပါတယ်။
၁။ Hidden folder ကို Right click>Properties> Hidden ကို အမှန်ခြစ်လေးဖြုတ်ပေးလိုက်ရင်လဲ ရပါတယ်။ ဒါကတော့ သာမာန် Hidden တွေကို ဖြုတ်တဲ့နည်းပေါ့။
၂။ ဒုတိယနည်းကတော့ Command Prompt ထဲကနေ ပြန်ဖော်တာပါ။
ပထမဦးဆုံး Start> All Programs> Accessories> Command Prompt ကို ခေါ်လိုက်ပါ။ shortcut နဲ့ သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ (win + R> cmd) Command Prompt box ကျလာပြီဆိုရင် attrib –s –h –r drive name): (hidden folder name)။
၃။ တတိယအနေနဲ့ကတော့ Unhide software နဲ့ ပြန်ဖော်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ကနည်းတွေနဲ့ မရရင် ဒီနည်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Software ကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ပေးထားတာမို့ စိတ်ချစွာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Software ကို အရင်ဆုံး http://www.saithantsin.com/2012/08/unhide-software.html မှ Download ဆွဲလိုက်ပါ။ rar ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ပါ။
Hidden folder ကို ဆွဲယူပြီးတော့ software လေးပေါ် တင်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် Folder, File တွေဟာ အလိုလို ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Hidden ဖြစ်နေတဲ့ File, Folder တွေအားလုံးကို တစ်ခုခြင်းစီ ဆွဲတင်ပေးပါ။ အားလုံး အဆင်ပြေ သွားပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါးရေးသားသူ – စိုင်းသန့်စင် (www.saithantsin.com)
← Data Communication	Networking Study →	လိုအပ်သည့် အကူအညီများအတွက် စာပြန်ရန်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ ဖော်ပြပေးရန် Cancel reply	Enter your comment here...
ယနေ့ လာရောက်ကြသူများ	စုစုပေါင်းလာရောက်သူ	95,236 ယောက်
ဆက်သွယ်ရန်merchant street, sittwe, rakhine+959421765666နည်းပညာအခက်အခဲများအတွက် ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းနိုင်သလို zawhlainghtun@gmail.com သို့ စာရေးသား မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Unknown FeedAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Unknown FeedAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.	RFA Burmese Newsအစိုးရဘတ်ဂျက် အတည်ပြုဆရာ ဆရာမတွေ လစာတိုးမည်USDP ထိပ် ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ ပြောင်းလဲ Movie & Videoဝက်ခြံအတွက် အကောင်းဆုံးကုထုံးများ August 23, 2016ချက်ပြုတ်ရင်း အပူလောင်ခြင်းဟာ ကလေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ် August 23, 2016သင့်ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေရန် နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့ အချက်အချို့ August 22, 2016ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် August 22, 2016မီးဖွားပြီးစ မိခင်တွေမှာ ဆံပင်ကျွတ်တာက ယာယီသာဖြစ်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေပြော August 22, 2016ဂျင်းစိတ်လေးတွေက ဝမ်းဗိုက်အတွင်းကလီစာတွေ ရောင်ရမ်းနာကျင်တာကို ကုသပေးနိုင် August 19, 2016	Myanmar MobileSamsung Galaxy S7 အတွက် FRP unlock Tool August 22, 2016ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် Lifestage app ကို Facebook ဖြန့်ချိ August 22, 2016စက္ကန့် ပိုင်းအတွင်း ဆူရှီလုပ်နိုင်သည့် စက်ရုပ် August 22, 2016OPPO customer service Tool August 22, 2016True smart max 4.0 plus Unlock SIM Firmware August 22, 2016True SmatMaxplus Firmware 100%Ok and Sim Unlock August 21, 2016ှSamsung ဖုန်းတွေအတွက် Network error ဖြစ်တက်တာလေးတွေနှင့်ပတ်သတ်ပြီး လိုအပ်တာလေးများ August 21, 2016Beach volleyball 2016 game August 21, 2016MTK Extractor v2.6.3 August 21, 2016	MRTV4An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. MyawadyAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.	↑ Top